अष्ट्रेलियाबाट खाडीमा भएको भाईसँगका कुरा (कथा) | OnlineChautari.com
अष्ट्रेलियाबाट खाडीमा भएको भाईसँगका कुरा (कथा)
June 18, 2016 | 5:45 pm
एउटा सानो समाजमा हुर्किएर ठुला सहर पसेर आफ़्नो भविष्य खोज्ने काम सायद मरुभूमिमा ईनार खन्न जतिकै भन्दा कम पक्कै पनि लाग्दैन मलाई ।
त्यसमाथि ‘बिदेस’ !
यहाँ त मान्छे बिरानो ,यो सहर बिरानो , बिरानो यहाँका बस्तीहरु !!!
ति गला नै चिसो हुने झरनाको पानीको मिठास यहाँ को नुनिलो पानीमा कहाँ !!
ति फोक्सो नै सरर हुने गरि चल्ने हावाको मजा यहाँको ओठ अनि तालु सुकाउने तातो हावा मा कहाँ !!
ऊ केटोलार्इ बिदेस लागेछ मोटाएछ भन्छन साथीहरु । अनि भूके पाउरोटी खाएर लागेको यो बोसो अनि मोवाईलको फ्रन्ट क्यामेराले गर्दा अनि ठुलो नै आएको मेरो अनुहारको बास्तबिकताको बारेमा कसलाई सुनाउ ? रअनि म नि जवाफ दिन्छु ए होर हल्का मोटाएकै छु , भन्नै पर्ने बाधयता आफ़्नैठाउँमा छदैछ ।
लेखकः सुरज ओली
त्यति भन्दा कमसेकम आमा र श्रीमती मुसुक्क त हसछिन् , ल सन्तोसे मोरा मिठो नमिठो नभनेस जे पाउछस खानु भन्दा घरमा तरकारी मिठो भएन भनेर घुर्क्याएर नखाएको भात को याद आउछ ।
बेउलो सुटकेस बोकेर कोट ढल्काएर नोट टिप्न हिडेको नि आज दुइ वर्ष बडी भएछ । खै नेपालमा हुदा बरर पैसा फल्ने रुख मेरै पालोमा लडेछन् जस्तो लग्यो यहाँ आएर ।
यहाँ दुःख देखियो सुख परपर सम्म देखिएन ,यहाँ भोजन देखियो भोक देखियन ,यहाँ मेहेनत् अनि परिश्रम धेरै देखियो तर आत्मसंँतुष्टी कतै देखिएन । अनि बिचित्रको कुरा यहाँ सास फेर्न सक्ने, हिन्न सक्ने ,बोल्न सक्ने ,सुख दुःख महसुस गर्न सक्ने तर मनवता नभएका मान्छे रुपी रोबेर्टहरु प्रसस्त भेटियो ।
धेरै समय पछि बिदाको समय पारेर खाडीको गर्मिमा आफ़्नो तालु मा आलु ऊसिनिरहेको मेरो भाईसँग कुरा भयो । सामान्य घर तिरका कुरा सकिएपछि काम अनि सँगसगै दामको कुरा जोडिएर आयो ।
ऊसले भन्यो दाजु हजुरको त देस पनि राम्रो,भेस पनि राम्रो अनि गोजी पनि टाइट नै होला ।
अनि मैले नि जवाफ दिए , देस त राम्रै हो शान्त, सफा अनि सुन्दर नै छ । प्राय ३६५ दिन मा ३६० दिन चै कालो पेन्ट अनि भेस्ट मै बित्छ तेइ भएर यता आउने बेलामा काठमाडौँ महल ,सिटी सेन्टरतिर पगितो पैसा हालेर किनेका कपडाहरु लगाउने फुर्सद नभएर नयाँ लागाएका हुन् । अनि गोजीमा चै कलेज फीस रुपी निकैठुलो प्वाल रहेको कुरा भाईलाई बताए । अनि कैले कसो त गोजीको दुलो ठुलो भएर टालटुल गर्न साथी भाईसँग दात देखाएको विवरणका साथसाथै तोलाका बचन खोलामा गएका तिता अनुभवहरु नि सुनाए ।
हजुर दाई एस्तो कुराहरु गर्नु हुन्छ अनि ति तपाईका प्रत्येक तस्बिरमा आखाँमा चस्मा नै लगाएर हेर्न पर्नेगरि टल्किएको आइफोंन चै पैसा नकमाए नि बाडछन् हो बिदेसमा ? उसले निकै उत्सुकता पुर्वक मलाई ज्रश्न तेर्स्यायो ।
मैले भने त्यो महिनाको अन्तिममा पैसा नभएर टाट पल्टिएको प्याक प्याक परेको बैंक खाताबाट फोन कम्पनीले काट्ने बिलको पिडा पनि उसलाई सुनाए । खाने अनि लगाउने कुरा सकिएपछि हाम्रो बिदेसका अनुभवका बारेमा कुरा चल्यो ।
भाईले भन्यो दाई ति सुन्दर हरियाली अनि स्वछ बाताबरण भएको मेरो देशबाट पहिलो पटक कतार (खाडी मुलुक) को टर्मिनल बाट बाहिर निस्कदा हर्रर चलेको तातो हावाले मुटु फुल्दा, ति चर्का घामले तालु ततिदा अनि तप तप कन्सिरीबाट चुहिएको पसिनाको धारोको पिडा उसले मलाई सुनायो । किनकी उसले त्यो कुरा घरमा आमालाई फोनमा सुनाएर ब्यर्थमा घरमा टेन्सन दिन ऊचित नलागेर होला उसले मलाई सुनाएको ।
उसको तिनै कुराले मेरो थकित सरिरलाई आराम गर्ने अनुमति दिएन अनि कोर्न बाद्य बनायो । उसले भन्यो यदि त्यो बेला ज्ञाने चोर देस छोड भनेर माओवादीको झन्डा नउचलेर जुलुसमा नहिनेको भए सायद परिस्थिति बेग्लै हुने थियो कि भन्ने उसलाई मनैमनमा लागेको रहेछ । जुन कुरा अब ईतिहास अनि किताबी पानामा मात्र कैद भैसकेको कुरा हामीले नकार्न नमिल्ने कुरा उसलाई संझाए । सर्पले नि समय समयमा काचुली फेर्ने गर्छ हो देसले नि आहिले आएर काचुली फेर्ने अवसर पाएको र यस्मा सबैले सकारात्मक सोच राखेर देसलाई सहिदिसशा दिनपर्ने कुरा भाईलाई बताए ।
आफ़्नै देसमा अवसरको कमि ,कम्जोर पारिवारिक स्थीति अनि हुनेखाने भन्दा हुँदाखानेको बाहुल्यता भएको देसमा खाडीको तातो घाम अनि बालुवामा हिरा टलकिएको देख्नु कुनै नौलो कुरा हैन हामी नेपाली हरुका लागि । यहाँ सबै को पौच युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियासम्म कहाँ पुगेन ? आफ्ना आधारभूत आबस्यकता पनि पुरा गर्ने धौधौ पर्ने मेरो देसमा कलेजको भर्ना सुल्कतिर्नेमा भन्दा पनि परराष्ट्रिय मन्त्रालय अगाडी पस्स्पोर्ट बनाउनेको लाईन लामो लाग्छ । अनि तिनै भिड देखेर ब्यवस्थापन गर्न प्रहरी खटाउन सक्ने मेरो सरकार नयाँ कार्ययोजना अनि विकासका योजना बनाएर त्यस ऊपर काम गर्ने नसक्दा मन एकाएक क्रोधित भएर खुन ऊम्लियेर आउछ ।
उनीहरुलाई सायद बिदेसको चर्को घामले पोलेको अनुभव, तिर्खाएर सुकेका ति घटीहरु, गलेर लखतरान भएर लगलगाई रहेका खुट्टाको महसुस उनीहरुले गर्न कहाँ पाएका होलान? श्रीमती च्यापेर राज्यको ढुकुटी रित्याएर तारे होटेल को एसी जडित कोठामा बसेर श्रम संझौता गरिरहदा त्यो आफ्नो श्रीमान तिन महिना अगि मरेर ६ महिना पछि बल्ल तल्ल लास आउदा , ति बिहान बेलुकै बिदुवा हुँदाको पिडा , अनि रुदा रुदा रितिसकेका आसु अनि अन्धकार सन्ततिको भबिस्य संझेर ति रातो बाकस खोल्दै गनाउने लास च्यापेर रोइरहेको श्रीमतीको पिडा मेरो अँन्धो सरकारलाई अलिकति पनि नहुनु साचै नै दुःख को कुरा हो ।
यहाँ गरिब परिवारमा जन्मिएको मान्छेले चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु पनि अपराध गर्नु जतिकै हो । नाताबाद अनि कृपाबादको सिद्दान्त लागू हुने मेरो देसमा पैसाको तागतको अगाडी उसको दिमागी तागत फिक्का हुन पुग्छ । अनि उसको सपना गएर खाडीको ढोका अगाडी सेक्युरिटि गाड नभए सेल्स म्यान भएर अन्त्य हुन्छ ।
न्युनतम ज्यालामा अधिकतम मिहेनत अनि जागरले बालुवा लाई महल बनाऊन सक्ने ति सिपहरु भोलिका दिनमा गएर हाम्रै देसलाई सिगार्ने मौकाको सिर्जना भयो, राजनैतिक स्थीति सुध्रिएर गयो ,प्राकृतिक स्रोत अनि खानीहरु प्रयोगमा आए भने पक्कै पनि आज खाडीमा पसिना बगाएर अंग्रेजी स्कुलमा आफ़्ना बच्चा पाडाएका हर्के दाईको छोराले डाक्टर बन्ने सपना देख्न सक्छ । जब यहाँ हाम्रोलाई भन्दा नि राम्रोलाई प्राथमिकता दिईनेछ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता चिजहरु निसुल्क हुन्छ तबमात्र अवसरका ढोकाहरु खुल्दै जाने कुरा भाईलाई बताए । बिचरा ओवरटाएम काम गरेर आखा तन्काउदै कुरा गरिरहेको भाई ऊगिरहेको थियो अनि मैले भाईलाई भनेः हेर बाबु कम आफैमा सानो ठुलो हुन्न । जे काम गरिरहेको छौ त्यसमा दक्ष बन आफुमा नयाँ नयाँ कलाको विकास गर भोलि गएर दाजुभाई काधमा काध मिलाएर देस बनाउन जुट्नु पर्छ । हजुरबाले मुखले मात्रै नभएर काम गरेर देखाए भने तिमि र म मा होस्टेमा हैसे थप्न चाडै नै आफ्नै देस फर्कनु पर्छ किनकि यहाँ धेरै बाजो पल्टाउनु छ । धेरै ढुंगा फुटाउनु छ । सडक, पुल, आस्पताल ,रंगशाला अनि थुप्रै कुराहरु बनाउनु छ । हजुरबा अनि बुबा वृद्ध भैसके उहाँहरुको काध गल्न सक्छन । तिम्रो र मेरो त तातो रगत र पसिना यो देसमा बगाऊ ताकी तिमीले जस्तै ति टर्मिनल बाहिर निस्किदाको पिडा आउदा सन्ततिले भोग्न नपरनेस् । अनि अन्त्यमा ऊ बिदेसमा बसेर फेसबुकमा भुक्यो भन्नेहरुलाई पनि गतिलै जवाफ दिन पर्छ ।
सुभारात्रि भाई भन्दै दाजु भाई बिदा भईयो ।
सुरज ओली, सिडनी अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियामा बिभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित सुर्के थैली साँझ हुदैं
अष्ट्रेलिया । नेपाली गीत संगीत लाई आजको दिन सम्म पुर्याउने सधैं नौलो र मिठो शब्द संगीत भर्न अब्बल सर्जक राजन…
अष्ट्रेलियामा नेपाली खाना प्रर्बधन कार्यक्रम सम्पन्न
अष्ट्रेलिया, २६ फागुन । युनिग्लोव विजनेस ग्रुप तथा क्युइनस्फोर्ड कलेजको सहकार्य र टु टेबलको आयोजनामा अष्ट्रेलियाको व्रिस्वेनमा एकदिनको नेपाली खाना…
अष्ट्रेलियाको पर्थमा नेपालीमाँझ जात्रा
गत शुक्रबार देखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘जात्रा ‘ले दर्शकको उच्च साथ पाएको छ । चलचित्रलाई समिक्षक तथा दर्शकहरुले…
अष्ट्रेलियामा बेजोड प्रस्तुतिको तयारीमा शिव परियार र अल्मोडा उप्रेती
नजिकिदै गरेका चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै अष्ट्रेलियाका बिभिन्न शहरहरुमा बृहत सांगीतिक कार्यक्रम म्युजिकल नाईट हुने भएको छ । म्युजिकल नाईटको सुरुवात…
संचारकर्मी देवकोटा भिक्टोरिया राज्यका लागि पर्यटनदूतमा नियुक्त
Call to bring in Australian investment
नेपालमा अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याउन आग्रह
केभिन रुडलाई समर्थन गर्न अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको अस्वीकार
‘ब्रिज द ग्याप नेपालको आयोजनामा सिड्नीमा ‘दशैं साँझ’
अष्ट्रेलियामा ‘चपली हाईट-२’